Is caro celinta lamaanaha waa lafdhabarta qoyska “Khilaafaadka Jaceylka” | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Is caro celinta lamaanaha waa lafdhabarta qoyska “Khilaafaadka Jaceylka”
Published: October 19, 2015, 11:00 pm
Waxaa jiray labo lamaane oo ku wada noolaa nolol aad u xiiso iyo jacayl badan oo aan dhamaanin xiisaheedu taasi oo ka dhalatay is caracelinta lamaanaha oo uu midba midka kale u sameeyo.
Waxaa is guursaday wiil iyo gabar aan wax sheeko ah dhex marin oo la is siiyay. Waxaana u bilaabatay nolashii lamaanaha ee ka dhaxeesay gacaliye iyo gacaliyadiisa.
Waxayna ku bilaabatay wanaag iyo is fahan ayadoo u dheertay mid waliba xishood iyo is ixtiraam taasi oo mar waliba lagu yaqaano dadka marka ay isku cusub yihiin. Maxaa yeelay oo midba midka kale ayuu marti u yahay.
Waxaa sii siyaaday wanaagii iyo hormarkii u dhaxeey lamaanaha, hasa yeeshee horaa loo yiri, “Ilko iyo carab ayaa iskugu dhaw waana is qoomaan” .
Waxaa dhacaday in uu midkood qalad ka dhacay kadibna lawada murmo, la isku xanaaqo hasa ahaatee ayna cid kale u kala dab qaadin, oo ay ayga uun heshiiyeen. Su’aashu waxa ay tahay siday u heshiiyeen.
Lamaanayaashii is maandhaafay midkii laga qaldanaa ayaa tanaasul la yimaaday. Asagoo aan wax eed ah iyo hadal sii cakiriyo aan meesha keenin ayuu u soo hoyday, lamaanihiisii kale kuna yiri, “iga raali ahaaw aniga ayaa qaladka lahaa’e”, oo wax waliba dusha ayuu saartay si uu u damiyo una baabiyo isfahan waaga ka dhax dhashay lamaanaha. Sidaas ayeyna ku soo laabatay nolashii caadiga ahayd, xiisihii iyo jacalkii .
Hadaba arinka intaasi kuma ekeen ee marlabaad, sadaxaad iyo afaraad ayuu sii watay qaladkii uu ka galaayay ka kale. Marka maalin waliba lamaanahaadii qalad kaa galaayo oo aan mid iyo laba aheen waatan keenta burburka reerka iyo kala tagiisa.
Hadaba haduu lamaanahaadu uu y in uu mar walba qalad la yimaado, kaa xanaajiyo oo aad wad murantaan oo uu hadane mar waliba isla quman yahay sideed ku xalin layd?
Waxaa dhacaday in uu kii qaladka laga galayay uu mar walba oo lamaanihiisa uu usoo hoydo raali gareeyo, qaladkii laga galayna uu dusha saarto oo uu kii kal ka dhigo mid ceeb ka saliim ah. Laakiin waxaa dhacaday in maalin maalmaha kamid ah uu sidii hore guriga u soo hoydo hase ahaatee markani way ka duwneeyd kuwii hora oo waxaa dhacaday arintan. Waxaa dhacaday in laga diido raali galintii.
Lamaanihii markuu arkay wax ka duwan wiix uu arki jirin ayuu fajacay, hasa ahaatee in tuuna la fogaani fajicii ayaa waxaa lamanihii kale yiri, “lamaane horta waxaan kaa raali galinayaa dhamaan waxii qalad ahaa ee aan ka agali jiray oo aniga ayaa ahaa midka mar waliba dulmiga ama qaladka la imaan jiray. Adiguna mar walba dusha uridan jiray, markaa waxaan rabaa in aan la imaado isbedal kaasi oo ah sidan .
Lamaanihii ayaa waxa uu codsaday in la kala tago. Waxa uu isu arkay in uu qalad ka galaayo lamaanihiisa oo uu u shaqaysanaayo cuqubo. Madaama uu garowsaday in mar waliba uu ahaa kan qaldan ee hadane isla quman ayaa waxaa ku dhashay fikir ah; intii ay kaaga imaan lahayd lamaanahaada cuquubo, inkaar dhibaato aduun iyo aakhiro in uu xalku yahay in la kalatago.
Hasa ahaatee markii uu lamanihii sabirka badnaa arkay in ay meesha timid isbadel kii hore ka duwan oo uu lamaanihiisii garwaaqsaday dhamaan qaladaadkii uu u geesan jiray, ayaa waxuu ku waaniyay sida tan.
Waxuu yiri, “horta aad ayaad u mahad san tahy waan kaa aqbalay raali galintii aad iga raali galisay qaladaadkii naga dhici jiray ilaa iyo hadane kuma dhahaayi adiga ayaa qaldanaa ee waan wad qaldaneen. Hadii aad garawsatay qaladkii dhici jiray ayaa hadaba waxaa jirta midkale oo ka fiican in aad garawsatid intii aad moodi lahayd in xalku uu ku jiro kala tagid.”
Waxa kale oo uu yiri, “sida aad hada aad u ogaatay in aan mar waliba ahaa kii marka uu soo hoyda ku raali galin jiray soo madhici karto in aan barito qalad galo oo aad iga roonaatid. Maxaa yaaley – hadii lakal roonaan roob mada,o – ee bal soo kama fiicno in aan caadeeysano in aan is qabano oo uu midba midka kale ka roonaado.
Madama an nahay carab iyo ilko, oo sida aan wada ogsoonahy carabka iyo ilkaha mar waliba waa is qoomaan hadane meel ay ku kal haraan malahan. Waxay ku qasban yihiin in ay meeshaas ku wada noolaadaan. Marka soo ma dhici karto in aan ayagoo kale noqono, is raali galino.
Marka waa in aan dhaqankaas labadeenu isku fulunaa oo aan caadeeysanaa si aan ula qabsano oo ay nolasheenu oo dhan u ahaato mid jacaylka mar waliba iyo is ixtiraamka ayna ka marnaanin .
Oo hadii lakala tagano soo mahan mid ka tagoo mid kale aad. Lagana yaabe in ay timaado tii hore mid kadaran maadaam aadan ku sabrin tii hore. Waxaan dhacaday in la isla garwaaqsado, lawada joogo, lawada noqdo ul iyo diirkeed iyo carab iyo ilko.
Hadaba casharka aynu ka qaadanayno qisadan waa in aadan fiirin qaladkii lagaa galay ee aad fiirisid wanaaga ka badan ee aad la imaan karto.
Sidookale waa in aan ogaanaa in uu ruuxa waan toobi karo uu wax fahmayo. Waa in aad sabarka kaashatid. Diinta islaamkuna waxa ay inoo oo sheegaysa qofkii ku xumeeya wanaaji asagaa is garan doonee.
Marak waxaan, dhamaan dhalinyarad ugu dardaarmayaa in la isku noqdo carab iyo ilko. Qisadan waa mid la mid ah qisadii laga wariya nin asxaabtii ka mid ahaa markii uu la hadlaayay gacalisadiisa oo uu ku dhahay, “hadii aadan isoo cara celineenin oo aan ana ku soo cara celineenin hadaba yeynaan reerkan wada dhisin.” Taasi oo ahayd intii aan reerkaba dhidibada u aasin aan meel wax isla dhigno.
Halakaan waxaan ku soo gabagabeenayaa qoraal kaygii, waxaan u mahad celinayaa website-ka kobciyemedia.com oo ku caan baxay in uu mar walba u soo gudbiyo lamaanayaasha wax walba oo gaarsiinaaya hormar iyo guul. Waxaan la wadaagayaa taageerada uu inoo fidinaayo hadii aan nahay dhalinta .
W/D Ahmed nur ise
Wax Badan Oo Aadan Ogeyn Ka Ogoow Khilaafka Qoyska Iyo Xalintooda…!!!